FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PANDA SHEPHERD - ALIKA
Piebald Alemanina Mpiandry
Mpiandry Alemanina Tricolor
Ny Panda Shepherd dia loko piebald Mpiandry Alemanina . Mifanaraka tsara sy matanjaka be izy io. Ny fandokoana piebald dia nitranga tamin'ny tsipika GSD tokana. Fotsy 35% izy, mainty sy mainty ny sisa amin'ny fandokoana ary tsy misy Mpiandry Alemanina fotsy amin'ny razambeny. Ny Panda Shepherd dia manana vatana matanjaka sy hozatra ary somary lavalava miaraka amin'ny taolana maivana sy matevina. Ny loha dia tokony hitovy amin'ny vatany, ary ny handrina somary boribory. Mainty matetika ny orona, na eo aza ny manga na ny atiny dia mipoitra ihany indraindray, nefa heverina ho lesoka ary tsy azo aseho. Mihaona ny nify amin'ny manaikitra hety mahery. Ny maso maizina dia miendrika almond ary tsy mipoitra mihitsy. Ny sofina dia mivelatra amin'ny fotony, manondro, mahitsy ary mihodina. Ny sofin'ny alika kely ao anatin'ny enim-bolana dia mety hidina kely. Ny rambony miraviravy dia mahatratra saika ny volony ary mihantona rehefa milamina ny alika. Hozatra ny tongotra sy soroka eo aloha ary matevina sy matanjaka ny feny. Ny tongotra boribory manana faladia tena mafy.
Matetika ampiasaina amin'ny alika miasa, ny Panda Shepherds dia be herim-po, mailo, mailaka ary tsy matahotra. Faly sy mankatò ary te hianatra, milamina, matoky tena, matotra ary hendry, Panda Shepherds dia mahatoky sy be herim-po tokoa. Tsy hieritreritra indroa momba ny fanomezana ny ainy ho an'ny fonosin'olombelona izy ireo. Manana fahaizana mianatra izy ireo. Panda Shepherds dia te-ho akaiky ny fianakaviany, saingy afaka mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra. Mila ny olony ity karazany ity ary tsy tokony havela hitokana mandritra ny fotoana maharitra. Mibolisatra fotsiny izy ireo rehefa mahatsapa fa ilaina izany. Ampiasaina matetika ho toy ny alika polisy, ny Panda Shepherd dia manana fahatsapana miaro tena mafy, ary tena mahatoky amin'ny mpikarakara azy. hifanerasera ity karazany ity dia manomboka tsara amin'ny alika kely. Ny herisetra sy ny fanafihana ny olona dia vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanofanana. Mipoitra ny olana rehefa avelan'ny tompony hino ny alika mpitarika fonosana ny olona ary / na tsy manome ny alika ny fampihetseham-batana ara-tsaina sy ara-batana isan'andro mila milamina izany. Mila tompona ity karazana ity manam-pahefana ara-dalàna ambonin'ilay alika amin'ny fomba milamina, fa hentitra, matoky tena ary tsy miovaova. Ny alika marin-toerana, voalamina tsara sy voaofana dia amin'ny ankapobeny, tsara amin'ny biby hafa ary tsara amin'ny ankizy ao amin'ny fianakaviana. Tokony hofanina tsara amin'ny fankatoavana hatramin'ny fahazazany izy ireo. Ireo mpiandry omby Panda izay manana tompona mazàna ary na tsy voahaja ny toe-tsain'izy ireo dia mety ho saro-kenatra, malefaka, mety ho voan'ny tahotra hanaikitra ary hampivelatra olana miambina . Tokony ho izy ireo Ampiofanina ary nifanerasera hatramin'ny mbola kely. Panda Shepherds dia tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy ireo, na izany aza dia tsy handray tsara ny fifehezana henjana koa izy ireo. Ny tompona dia mila manana rivotra manam-pahefana voajanahary amin'ny fihetsiny. Aza mitsabo an'io alika io toy ny hoe olombelona izy . mianatra instincts canine ary karakarao araka izany ny alika. Panda Shepherds dia iray amin'ireo karazan-jaza mahay indrindra sy mora zahana. Miaraka amin'ity alika miasa tena mahay ity dia misy ny familiana hanana asa sy asa amin'ny fiainana ary a mpitarika fonosana tsy miova mba hanoroana azy ireo tari-dalana. Mila toerana hafa izy ireo handefasana ny heriny ara-tsaina sy ara-batana. Tsy karazan-tsambatra iray izay ho faly mandry fotsiny manodidina ny efitranonao na mihidy ao an-tokontany. Manan-tsaina tokoa ity karazany ity ary mianatra mora foana ka nampiasaina ho toy ny alika mpiandry ondry, alika mpiambina, amin'ny asan'ny polisy, ho torolàlana ho an'ireo jamba, amin'ny asa fikarohana sy famonjena ary amin'ny miaramila. Ny Panda Shepherd koa dia miavaka amin'ny hetsika alika maro hafa ao anatin'izany ny Schutzhund, ny fanarahana, ny fankatoavana, ny hakingana, ny fanatanjahan-tena. Ny orony tsara dia afaka mamofoka zava-mahadomelina ary mpiditra an-tsokosoko , ary afaka mampitandrina ny mpikarakara ny fisian'ny toeram-pitrandrahana ambanin'ny tany ara-potoana mba hisorohana ny fanapoahana, na ny fivoahan'ny entona ao anaty fantsona nalevina 15 metatra ambanin'ny tany. Ny Panda Shepherd dia fampisehoana malaza sy mpiara-mitory amin'ny fianakaviana ihany koa.
Ny fiompiana tsy misy fanavakavahana dia nanjary aretina mandova toy ny hipplasia sy ny kiho (azo antoka fa samy voamarina tsara ny valahany avy amin'ny OFA), aretin-dra, olana amin'ny fandevonan-kanina (angamba noho ny hozatra), epilepsy, eczema maharitra, keratitis (fivontosan'ny ny kornea), ny aretin'andoha ary ny parasy.
Ny Panda Shepherd dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Ireo alika ireo dia tsy mihetsika intsony ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny.
Panda Shepherd Dogs dia tia hetsika mavesatra, tsara kokoa raha ampiarahina amin'ny fampiofanana karazana, satria ireo alika ireo dia tena manan-tsaina ary maniry fanamby tsara. Mila entina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ny ankamaroan'ny mpiandry dia tia milalao baolina na Frisbee. Folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo minitra fakana sary miaraka amina fitsangantsanganana isan'andro dia handreraka ny alikanao ary hanome azy tanjona kendrena. Na fanenjehana baolina, fisamborana Frisbee, fanofanana fankatoavana, fandraisana anjara amin'ny vondrona playine an-trondro na fitsangatsanganana / jogging lava fotsiny dia tsy maintsy vonona ianao hanome endrika fanazaran-tena isan'andro. Ny fanazaran-tena isan'andro dia tsy maintsy misy hatrany ny diabe / jogging isan'andro hanomezana fahafaham-po ny fifindra-monina alika. Raha tsy dia zatra loatra ary / na tsy voadinika ara-tsaina dia mety ho lasa io karazana io tsy milamina sy manimba . Mahavita asa tsara indrindra amin'ny asa atao.
mombamomba ny fifangaroan'ny pointer border collie
Ny Panda Shepherd Dog dia piebald Mpiandry Alemanina izay nitranga tamin'ny tsipika GSD tokana. Fotsy 35% izy, raha mainty sy mainty kosa ny sisa amin'ny fandokoana. Mutation tampoka ary tsy misy Mpiandry Alemanina Fotsy amin'ny razambeny. Ny ray aman-dreny namokatra zanak'alika vavy mainty / tan / fotsy dia tohodrano mpiandry alemanina mainty mena ary alika mpiandry mpiandry alemanina mainty sy mena. Ny ambiny kely amin'ny alika kely dia alika kely hita maso mainty sy mainty izay mpiandry mpiandry alemanina. Ny alika kely mainty / tan / fotsy ihany koa dia nanana roa maso manga . Mba hiarovana ny sarin'ny fandaharam-pianarany, Rtoa Cindy, mpiompy mpanorina, dia nitondra ny alika kely piebald tany amin'ny Hopitaly State University Veterinary Hospital mba hahitana ny tena antony nahatonga ilay anomaly. Ny ray aman-drenin'ireo zaza ireo dia nohamafisina ho toy ny GSD madio ary tsy misy White GSD na karazana hafa amin'ny andalana. Ity dia GSD purebred iray teraka tamin'ny fandokoana piebald. Ilay sire sy tohodrano iray ihany izay namokatra alika kely piebald dia nompana in-telo ary ny zaza rehetra dia teraka niaraka tamin'ny loko miloko mainty sy mainty. Fitsapana ny loko palitao canine be dia be no natao tamin'ilay zanak'alika piebald izay nantsoina hoe Frankie. Rehefa nihalehibe i Frankie dia teraka tamin'ny GSD mainty sy mainty nentim-paharazana. Amin'ireo zanak'alika kely efatra teraka, ny telo dia nivadika palitao mainty / tan / fotsy saingy tsy nanana ny maso manga , raha ny alika kely fahefatra kosa dia ny fandokoana mainty sy mainty nentim-paharazana. Ny alika mpiandry alemanina mainty / tan / fotsy dia nomena anarana hoe Panda Shepherds.
'Ity i Rommell. Ny rainy dia mpiompy alemanina volafotsy Silver ary ny reniny dia Panda. Noraisiny ny reniny. Efa ho 9 volana izy ary milanja 103 lbs. Rommell dia tia milalao amina alika hafa any amin'ny valan'alika. Tena sosialy izy ary tia famihinana. Nilaza ny mpiompy fa izy dia alika kely amin'ny fako. Tena marani-tsaina ary manandrana mamono ahy amin'ny rantsantanany (paw). '
Hitman the Panda Shepherd amin'ny faha-6 volana - naterak'i Emmanuel Lintag, izay samy mainty sy mainty ny tohodrano sy ny vadin'i Hitman. Hitman no hany Panda tao amin'ny fako.
Hitman the Panda Shepherd amin'ny faha-6 taonany, naterak'i Emmanuel Lintag
Hitman the Panda Shepherd, eo amin'ny 7 volana miaraka amin'ny tompony, novolavolain'i Emmanuel Lintag— 'Nandeha an-tendrombohitra izahay sy Hitman ary niampita renirano.'
Hitman the Panda Shepherd amin'ny faha-7 volana miaraka amin'ny tompony, novolavolain'i Emmanuel Lintag
mpiompy mpiompy alemanina mpiompy australianina
Sary mpihetsiketsika alika mpiandry omby 1
Fampahalalana momba ny alika mpiandry alemanina
pyrenees mahafinaritra sy fifangaroan'ny volamena retriever